Mark Lawrenson ayaa soo saaray saadaashiisa kulamada usbuuca tobnaad ee horyaalka Premier League, xilli ay hoggaanka hayso Tottenham oo ay Axadda ballansan yihiin naadiga deriska ay yihiin ee Chelsea.
Ozil, xaaskiisa iyo gabadhiisa saxaafada horteeda
Tababare Jose Mourinho ayaa ku laaban doona garoonkiisii hore ee Stamford Bridge, balse waxa uu markan doonayaa inuu guul-darro usoo xambaariyo, saddexda dhibcoodna kasoo qaato garoonkii uu beryaha qaarkood sida waallida ah ugu dedaali jiray inuu koobabka keeno.
Tottenham ayaa u baahan inay guul kale soo hoyso si ay hoggaanka horyaalka usii hayso laakiin haddii ay khasaare la kulanto amaba ay barbarro gasho waxayy taasi fursad siinaysaa kooxaha Liverpool oo ay isku dhibco yihiin iyo labada naadi ee kale ee Chelsea iyo Leicester City oo iyaguna laba dhibcood oo kaliya ka hooseeya.
Khabiirka BBC Sports ee Mark Lawrenson oo sidii caadada ahayd soo saaray saadaashiisa toddobaadlaha ah ayaa waxa uu guul-darro ugu sii bushaareeyey jamaahiirta kooxda Tottenham oo uu u sheegay inay iska illoobaan inay figta sare ee horyaalka sii fadhiyaan, isagoo tilmaamay in guul-darro 2-1 ah ay kala kulmi doonaan Chelsea oo iyaduna yeelan doonta 21 dhibcood.
Liverpool ayaa hoggaanka ku fadhiisan doonta marka ay 2-0 ku garaacdo Brighton oo ay duhurnimada Sabtida berri u tegayso, sida uu rumaysan yahay khabiirkani, laakiin Manchester City oo meel hoose ku jirta ayaa iyaduna sare usoo ruqaansan doonta, halka Manchester United iyo Arsenal ay dhamaantood heli doonaan guulo ka caawiya inay sare usoo kacaan boosaska nioyadjabka ah ee ay ku jiraan.
Tababare Jurgen Klopp oo ay kooxdiisu guul ka gaadho ciyaartan waxay u saamixi doontaa inay hoggaanka si buuxda gacanta ugu qabato haddii ay rumowdo saadaasha Lawro oo laga badiyo Tottenham, waxaana labaad iyo saddexaad isku qabsanaya Chelsea iyo Leicester City.
Geesta kale, Leeds United oo barbarro lasoo gashay Arsenal toddobaadii hore ayaa mar kale ay isku barbar-dhici doonaan Everton, sida ay muujinayso saadaashani.
Saadaasha Mark Lawrenson ee kulamada usbuuca 10aad ee Premier League